यस्तो बनाइदियो चीनले तातोपानी नाका ! – " कञ्चनजंगा News "
यस्तो बनाइदियो चीनले तातोपानी नाका !
No Comments on यस्तो बनाइदियो चीनले तातोपानी नाका !
भवनभित्र सुन्दर बगैंचा, पानीको फोहोरा, पार्किङलगायत सबै सबै सुविधासम्पन्न छ । भोटेकोशी नदीमाथि निर्माण भएको १ सय ६० मिटर लम्बाइको पक्की ट्रष्ट पुलमा इन्जिनियरिङ रुपमा असाध्यै राम्रो डिजाइन गरिएको छ । ०७० पुस ५ गते सुख्खा बन्दरगाहाको निर्माण सुरु गरिएको थियो । निर्माण सुरु भएको ३० महिनाभित्र काम सक्ने तयारी भए पनि भूकम्प र भोटेकोशी बाढीले निर्माण कार्य रोकिएको थियो ।
राजधानीबाट नजिकै रहेको भन्सार भएकाले पनि विगतमा यहाँ आउनका लागि कर्मचारीहरु निकै मेहनत गर्थे । दुई अधिकृतसहित १ सय बढी कर्मचारीहरु यसअघि कार्यरत भए पनि भूकम्प लगत्तै सबै कर्मचारी भागेका थिए । नाका सञ्चालन हुनै लाग्दा भन्सार विभागले कर्मचारीहरु पठाउन सुरु गरेको छ । सुरुमा एकजना नासुसहित बढीमा ८ जना कर्मचारी पठाउन लागिएको तातोपानी भन्सारका प्रमुख कृष्ण बस्नेतले जानकारी दिए ।
← ‘स्टिङ अपरेशन’ गर्न दिएको घुस रकम हराएपछि → उद्योगलाई विलिङ नगरेको भन्दै स्पष्टीकरण